13-kii Maajo, Oukitel K9 | Androidsis
13-ka Maajo, Oukitel K9 horey ayaa loo sii haysan karaa
Sanadihii ugu dambeeyay, shirkadda Oukitel waxay suuqyo kala duwan ka furtay suuqa, badankooduna waxay leeyihiin qiime aad u wanaagsan oo tayo wanaagsan. Sannad kasta, waxay soo bandhigtaa moodooyin kala duwan oo sannadkan, mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan waa Oukitel K9, terminal leh shaashad dhammaanteed.
Oukitel K9 wuxuu na tusayaa naqshad hore oo la mid ah tan laga helay baaxadda P30, oo leh dhibic biyo ah dusheeda ee weyn 7,12 inch screen, shaashad sidoo kale ah Full HD +. Haddii aad raadineyso terminal leh astaamo wanaagsan iyo shaashad aad u weyn, Oukitel K9 ayaa laga yaabaa inuu noqdo terminalka aad raadineyso.
Dhinac kale oo soo jiitay dareenka ugu badan ee bareegyadan baateriyada, a baytariga gaadha 6.000 Mah Mah, iyo taas oo aan ku ciyaari karno kuna daawan karno fiidiyowyo iyada oo aan wax walwal ah ka qabin rarida boosteejada. Batariga Oukitel K9 waxaa si buuxda loogu soo oogay 1,5 saacadood oo keliya, taas oo ay ugu wacan tahay nidaamka degdegga ah ee lacag bixinta iyo isticmaalka caadiga ah ee terminalka, waxaan u isticmaali karnaa dhib la'aan 2 ama 3 maalmood.
Shaashadda 7,12-inch iyo Full HD + xal (2244 × 1080), waxay leedahay saamiga 19: 9, oo ku habboon daawashada nooc kasta oo filim ama taxane ah oo ku yaal terminalka. Si loo maareeyo terminaalkan, Oukitel wuxuu doortay processor-ka MediaTek Helio P35, oo ah processor 8-core 2,3 GHz ah, dhammaantoodna ay weheliyaan 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah oo gudaha ah.
Kaamirada, oo ah dhinac kale oo dadka isticmaala ay tixgeliyaan inta badan, waa sameeyey Sony, ugu yaraan kamaradda weyn ee 16 mpx, oo ay weheliso kamarad kale oo 2 mpx ah. Dhanka hore wuxuu gaaraa 8 mpx. Terminalkani wuxuu ku raaxeeyaa dhammaan shaqooyinka ka yimid gacanta Android 9.
Oukitel K9 waxaa lagu heli doonaa laba midab: madow iyo buluug dhalaalaya, waxay ku habboon tahay shabakadaha 2G, 3G iyo 4G. Qiimaheeda marku suuqa ku dhaco wuxuu noqon doonaa $ 249,99, laakiin hadaan ka faa'iideysano soo bandhigista, waxaan ku heli karnaa kaliya $ 199,99, taasi waa, waxaan awoodi doonaa oo kaliya inaan ka faa'iideysano dalabkan laga bilaabo 13-ka Maajo ilaa 20 .
Si aad uga faa'iideysato dalabkan, waa inaad gujisaa tan Bangood xiriiriye ama ku iyada oo loo marayo Aliexpress.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Oukitel » 13-ka Maajo, Oukitel K9 horey ayaa loo sii haysan karaa
Huawei waxay sumcadda Samsung ku xumeyneysaa xayeysiinta P30 ee dukaan Kuuriyada Koonfureed ah